हस्तमैथुन भनेको के हो ? | www.aagopati.com Websoft University
हस्तमैथुन भनेको के हो ?
मानिस जन्मजात नै यौनिक हुन्छ। विवाहभन्दा पहिले मानिस यौनिक नहुने र विवाहपछि तुरुन्तै यौनिक हुने होइन। मानिस स्वभावतः जिज्ञासु हुन्छ। उसले आफ्नो वरिपरिको मात्र होइन भित्री कुरा पनि अन्वेषण गर्छ र त्यसका बारेमा सक्दो जान्न खोज्छ। यसैक्रममा उसले आफ्नो शरीरका बारेमा पनि खोजीनीति गर्छ र कुन अङ्गको स्पर्शबाट कम र कुन अङ्गको स्पर्शबाट बढी सुखानुभूति हुन्छ थाहा पाउन थाल्छ।
फ्रायडका अनुसार अनुसार पूर्वलंैगिक अवस्थामा यौन उत्तेजनाको केन्द्र यौन अङ्गहरूमा हुँदैन। जन्मदेखि एक वर्षसम्मको उमेरमा यौन उत्तेजनाको केन्द्र मुखमा हुन्छ। उनका अनुसार बालकले स्तनपान वा अन्य केही चुसेर आनन्द प्राप्त गर्छ। त्यसपछिको समयमा उक्त केन्द्र मलद्वारमा हुन्छ र दिसा गर्दा बालकले आनन्द पाउँछ। यो अवस्था १ देखि ३ वर्षसम्मलाई मानिएको छ। त्यसपछि बालक लैंगिक अवस्थामा प्रवेश गर्छ। उक्त अवस्थामा पुगेपछि पनि मुख, ओठका साथ मलद्वार क्षेत्र यौन आनन्दको एक प्रमुख अङ्गका रूपमा कायम रहन्छ। यो अवस्थाको सुरुको समय अर्थात् ३ वर्षदेखि ५ वर्षको उमेरमा यौन उत्तेजनाको केन्द्र यौनाङ्गंगमा हुन्छ। केटाहरूमा लिंग यसको केन्द्र हुन्छ भने केटीहरूमा भगांकुर। यो अवस्थामा छोराहरू आफ्नै आमाप्रति र छोरीहरू पिताप्रति आकषिर्त हुन्छन्। केटाहरूका लागि यो अवस्थालाई ओडिपल अवस्था र केटीहरूका लागि इलेक्ट्रा अवस्था भनिन्छ। त्यसपछि सुसुप्तावस्था प्रारम्भ हुन्छ। ५ वर्षको उमेरपछि किशोरावस्थाको नभएसम्म बालबालिका यही अवस्थामा रहन्छन्। किशोरावस्थामा बयस्क हुने क्रमको थालनी हुन्छ। यौन परिवर्तनका लागि आवश्यक आन्तरिक रसहरूको स्राव सुरु भएपछि किशोरावस्थाको थालनी सँगै यो लैंगिक अवस्था वयस्कको जस्तै भएर जान्छ।
आफ्ना यौन अङ्गहरू आफैंले चलाएर यौन सन्तुष्टि लिने एक किसिमको यौन व्यवहारलाई नै हामी हस्तमैथुन भन्छौं। कुनै पनि समाजमा यही नै किशोरावस्थामा यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न गरिने प्रमुख क्रियाकलाप हो। कतिपयले त पहिलो यौन चरमसुख यही विधिबाट पाएका छन्। किशोरावस्थामामा शिखरमा रहने यो यौन क्रियाकलाप बयस्क अवस्थाको उत्तरार्धमा आफैं कम भएर जान्छ। पुरुष तथा महिला दुवैले हस्तमैथुन गर्ने भए पनि महिलाहरूको तुलनामा पुरुषहरूमा यो क्रियाकलाप बढी पाइन्छ। प्रायः सबैजसोले जीवनमा कुनै न कुनै बेला हस्तमैथुन गरेकै हुन्छन्। धेरैले महिलाहरूले हस्तमैथुन गर्दैनन् भन्ने मान्छन् तर यथार्थ त्यस्तो छैन। महिलाको यौन जीवनमा पनि हस्तमैथुनको ठूलो भूमिका हुन्छ।
तपाईंले किन यो प्रश्न गर्नु भयो थाहा भएन तर कतै यसले हानी गर्छ कि धेरैलाई चासो र चिन्ता हुन्छ। किशोरावस्थामा यौन इच्छा सबैभन्दा तीव्र र बढी हुने बेला बन्देज बढी छ। विवाह हुने उमेर पछाडि धकेलिएपछि यो यौन आनन्द पाउनेबाटो, यौन सम्पर्क गर्न पाउने उत्तम विकल्प हो।
बुझ्नु पर्ने कुरा हस्तमैथुनले स्वास्थ्यसम्बन्धी यस्ता कुनै हानी(नोक्सानी गर्दैन। अनावश्यक रूपमा चिन्ता गरे वा हिनताबोध गरे त्यसको नकारात्मक असर पर्न सक्छ। त्यसलाई आफ्नो मनबाट निकाल्न सक्नुपर्छ।